ATRIKASA - FARITRA BOENY : Mametraka vina hanondrana tantely 100 taonina ireo mpiompy
Ny 14 sy 15 Marsa teo no nanatanterahana ny atrikasam-paritra mikasika ny fandalinana sy fampiroboroboana ny Rojo-pihariana tantely ato anatin’ny faritra Boeny. 17 mars 2017
Natao tao amin’ny efitrano malalaky ny trano fandraisam-bahiny Coco Lodge Mahajanga, nandritra roa andro ny atrikasa.
Raha tsiahivina dia ny taona 2013 no nifoha tamin’ny torimasony ireo mpiompy tantely teto amin’ny Faritra rehefa nahazo tohana ara-teknika sy ara-pitaovana narahina fiofanana maromaro avy tamin’ny fandaharan’asa Malagasy-Alemaina na PGM-E misahana ny tontolo iainana tamin’izany. Ny fananana toho-tantely maoderna miisa 1 000 mihodina sy mamokatra ny taona 2016 no vina napetrak’ireo mpiompy sy mpanao tantsoroka tamin’izany, ary tratra soa aman-tsara izany ankehitriny. Niroso amin’ny vina vaovao ho an’ny taom-piasana 2017-2021, izay hikendrena vokatra tantely maherin’ny 100 taonina haondrana indray izy ireo ankehitriny.
Natao indrindra ity atrikasa ity mba handraisan’ireo mpisehatra rehetra anjara, ka nahitana ireo mpiompy tantely, mpivarotra sy mpanodina ao anatin’ny vovonana fandrama Boeny, ny mpanao tantsoroka ara-bola sy ara-teknika, ireo Sampandraharam-paritra rehetra voakasika ary ny Faritra Boeny.
“Ho fitsinjovana ny ho avin’ny mpiompy tantely aty amin’ny Faritra mba hahazoan’ny vokatr’izy ireo ny « labellisation » sy hivarotra izany eo amin’ny tsena iraisam-pirenena no tena tanjonay”, hoy ny Lehiben’ny Faritra Boeny Saïd Ahamad Jaffar. Nohamafisiny fa “anisany mitazona ny kalitao tsara ny tantelin’i Boeny ny fananany hazo misy vony isan-karazany takian’ny fenitra iraisam-pirenena toy ny mamoloana, honko, satrana, mokonazy, madiro ary manary na “palissandre””.
Tonga nizara traikefa sy nanao fifanakalozana ihany koa ireo solontenan’ny PAGE-GIZ sy ny teknisiana misahana ny fiompina tantely avy amin’ny Faritra Diana sy Atsimo-Andrefana. Tanjona telo no kendren’ny atrikasa dia ny hametraka ny vina 2017-2021 mifanaraka tsara amin’ny hetahetan’ireo mpisehatra, ny hamantatra ireo paik’ady maharitra mifanaraka amin’ny zava-misy eto Boeny eo amin’ny tontolon’ny fiompiana tantely, hanangana drafitr’asa izay mora azo tanterahin’ireo mpisehatra. Nodinihina tao ihany koa ny paikady hiatrehana ny aretim-pandrama « varoise » sy ny ady amin’ny doro tanety, ho fiarovana azy ireo.